Creative Writing » ရောက်တတ်ရာရာ…….	14
ဂျစ်စိန် says: စာများများ ဖက်ကြဟေ့
Thint Aye Yeik says: ကိုယ်ပြောချင်တာ တော်တော်များများကို ပြောပြသွားတဲ့ပိုစ့်ပဲ။
Tawwin Pan says: ဟုတ်ပ! လောလောဆယ်တော့ ဖွေးဖွေးကို ကြိတ်မှန်းနေတဲ့လူကြီးရေးတဲ့စာတောင် အစနဲ့ အဆုံးဖတ်လိုက်၊ ပြီးမှ အလယ်ကနေ ဖောက်ဖတ်လိုက်လုပ်နေတာ……..
ဦးကြောင်ကြီး says: တော်ဝံပန်းကို (မင်းသား)ဇော်ခင်ကြမ်းသလို မော်တင်ကမ်းမှာ ကြော်ဝင်နမ်းလိုက်တယ်။။။
Tawwin Pan says: (မင်းသား)ဇော်ခင်ဆိုတာကို …ခင်ဇော်ဆိုပြီးမှားဖတ်နေတာ….မမကြီးခင်ဇော်နဲ့ ဘယ်တုန်းကမှ မနမ်းမိပါဘူးလို့……..ဟိဟိ
ဂျက်စပဲရိုး says: အတည်အတံ့ ရေးတဲ့ ပို့စ်တွေမှာ စာလုံးပေါင်း လာမှားနေရင် ဘယ်လိုမှကို ဆက်ဖတ်ဖို့ ခံစားချက် မရှိတော့တာ။
Tawwin Pan says: မှားတာရှိရင်လည်း ထောက်ပြပါနော်။
ဂျက်စပဲရိုး says: အဲ အမ ရေးတာကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူးဗျ။
Tawwin Pan says: အဲ အမ ကြီးတော့ မသုံးပါနဲ့လားကွယ်။ အဲဒါမြင်ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် တိရိစ္ဆာန်လိုလို ဘာလိုလိုမြင်မိတယ်။ ဂျီတော့ခေတ်တုန်းက အဲဒီအမနဲ့ တချိန်လုံး ရန်ဖြစ်လာတာ။
Kaung Kin Pyar says: အတော်စုံစုံ ရေးထားတာပဲ…။ ခုရက်ပိုင်း တွေးမိနေတာတွေ တော်တော်များများပါတယ်….။
အဲ… နောက်ပြီး တော်ဝင်ပန်း ပြောဖို့ ကျန်ခဲ့တာတစ်ခုရှိသေးတယ်… ဟိုဟာဒီဟာတွေရှဲရင် ဟိုလိုဒီလိုတွေ ဖြစ်မယ်ဆိုတာမိုး….. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 115
Tawwin Pan says: ဆက်ရေးရင် စာက အရမ်းရှည်မှာစိုးလို့ ဖြတ်လိုက်တာ။ ကောင်းကင်ပြာ ပြောသွားတာတွေလည်းတွေ့ပါ့။
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .Good points !!!
manawphyulay says: အမှန်တော့ ဖဘကို သိပ်မ၀င်ဖြစ်ဘူး။ ၀င်ရင်လည်း ခုပြောတဲ့ဟာတွေပဲ တက်တက်နေတော့ ဘေကုန်တာပဲ အဖတ်တင်တယ်။ သတင်းကျပြန်တော့ မှန်မမှန် ချိန်နေတာနဲ့ မဖတ်တော့ပြန်ဘူး။ ခုလည်း ရောက်တက်ရာရာ ဖတ်ဖို့ ရောက်တုန်းပေါက်တုန်းလေး ဖတ်မှတ်လေ့လာသွားပြီး ဒီပွိုင့်တွေကို ကြေငြာတင်သူကော မေးမြန်းသူတွေကော မြင်တွေ့နိုင်ပါစေနော်…